Adora & etc.: August 2013
နောက်ကျနေသော အိတ်တလုံး (တဂ်ပို့စ်)
တခါမှတဂ်ပို့စ်ကိုမရေးဖူးပါဘူး။ မမသက်ဝေက အိတ်မှောက်ဖာသွန် နှစ်ဆယ့်ခွန်ဆိုပြီး ရေးဖော်ရေးဖက်အားလုံးကိုတဂ်ပါတယ်ဆိုတော့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ ခုမှ စာစရေးပြီး ကိုယ့်ဘာကိုယ် အတင်း စီနီယာအကို အမတွေရဲ့ စာရေးဖော်လုပ်ပလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သိတယ်မှတ်လား။ စိတ်ထဲမှာတော့ ငါ့အိတ်က ဒီအမလောက် မများပါဘူးပေါ့။ ရေးစရာမှရှိပါ့မလားလို့ တွေးတောင်ပူလိုက်သေး။ ဒါပေမဲ့ပေါ့လေ...
-တထွာခန့်ရှည်ပြီး ၁လက်မခန့်ထူသော မိန်းခလေးကိုင် အညိုရောင်သားရေ ပိုက်ဆံအိတ်တလုံး။ ပိုက်ဆံအိတ်ထူနေတာ အားလုံးထင်နေကြတဲ့အတိုင်း ပိုက်ပိုက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဘဏ်ကဒ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်၊ စင်္ကာပူပီအာကဒ်၊ အိမ်နားကmallမှာ ခေါင်းလျှော်ရည်လို၊ ဆပ်ပြာရည်လိုမျိုး တခုခုလိုရင်အလွယ်တကူ ပြေးဝယ်နေကြ "watson"ကဒ်နဲ့ ဖိနပ်မြင်မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဝယ်ဖြစ်လွန်းလို့ မဖြစ်မနေထည့်ထားတဲ့ "Charles & Keith"က ကဒ်အမဲလေး။ နောက်ပြီး ပိုက်ဆံအိတ်နောက်က အကန့်ထဲမှာ ပလက်စတစ် အိတ်သေးသေးလေးနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ Passport ပုံတချို့( ခရီးသွားလို့ visa လျှောက်ရင် ရုပ်ဆိုးပုံတွေထပ်ပြီး မရိုက်ရစေရန် ) ပိုက်ဆံဆိုလို့ ၁၀တန် တချို့ရယ်၊ မြန်မာပြည်ပြန်တုံးကLuckရွှင်တယ်ဆိုပြီး သူများပေးထားတဲ့ ၅၀၀၀တန် တရွက်ရယ် ဒါပဲရှိတယ်။ ဘာတွေမှန်းမသိ ခေါက်သိမ်းထားတဲ့ စာရွက်တွေကို ဘယ်သူမှမမြင်ခင် လွှင့်ပစ်လိုက်သည်။
-ချည်ထည် အမည်းနဲ့ခရမ်းစပ်ထားတဲ့ မြန်မာပြည်ဖြစ်နောက်ထပ် ပိုက်ဆံအိတ်တလုံး။ဒီအိတ်ကို အများအားဖြစ် ရုံးကနေ နေ့လည်စာထွက်စားတဲ့အခါသုံးပါတယ်။အထဲမှာ ၁၀တန် တချို့၊၂ကျပ်တန် တချို့ နဲ့ ချမ်းသာသမျှ အကြွေ တွေပါ။ ကျမက တကျပ်နဲ့ပြား၅၀ အကြွေကိုစုဘူးထဲထည့်ပါတယ်။ စုဘူးသုံးတဲ့ အကြောင်းရင်းက အကြွေတွေက လေးလို့ပါ။နောက်တခုက စုဘူးဖောက်ရင် ၁၀၀မျိုး ၂၀၀မျိုးပိုက်ဆံထွက်လာတာဆိုတော့ shopping လုပ်ဖို့ အပိုရတာပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား။ ဒီထဲမှာနောက်ထပ်တွေ့တာ ဘယ်တော့မှ မသုံးဖြစ်တဲ့ ကလစ်အသေးတခု၊ Challenger ကအလကားရထားတဲ့ ပန်းရောင် 8G thump drive တခု။
-ရာသီမရှိပဲ နေပူလိုက်၊ မိုးရွာလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ထီးမယူဘဲ နေပူကြီးထဲလျှောက်သွားလို့ အပူရှပ်လိုက်၊ မိုးရွာထဲဖြတ်ပြေးလို့အအေးပတ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ကျမကိုမကြည့်ရက်လို့ သူငယ်ချင်းအမေဝယ်ပေးသွားတဲ့ သရက်သီးတံဆိပ် ပန်းရောင်ထီးတချောင်း။
-ရထား၊ ကားစီးဖို့ EZ link ကဒ်။
-အနက်ရောင်မှန်ဝိုင်းလေးတခု၊ အဆီစုပ်စက္ကူ တထုတ်၊ Macက မျက်နှာလိမ်း ပေါင်ဒါတဗူး ၊ နှုတ်ခမ်းနီ ၃တောင့်က ကိုယ်အပူချိန်ကိုလိုက်ပြီး အရောင်ပြောင်းတယ်လို့ ကြေငြာတဲ့ အဆီတမျိုး၊ လက်ဆောင်ရပြီး ကျမနဲ့သိပ်မလိုက်ပေမဲ့ ဆိုးဖြစ်နေတဲ့ ပန်းရောင် တတောင့်၊ လိမော်ရောင် နောက်ထပ်တတောင့် (တခါမှ ရုံးမှာထုတ်မဆိုးဖြစ်၊ ဘာကြောင့်သယ်နေမှန်းမသိ)
-Evelyn Crabtree Hand cream တတောင့် နဲ့ အစုံသုံး လိုးရှင်းတဘူး။ (ဒါလဲ တော်ရုံထုတ်မလိမ်းဖြစ်)
-ရေမွှေးအဆီပုလင်းသေးသေးလေးတခု၊ မှတ်မှတ်ရရ Arab Stက ဝယ်လာတာ၊ နည်းနည်းသုံးပြီး အနံ့အရမ်းချိုအီလို့ အခုမကြိုက်တော့။
-ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါး ကန်တော့နည်း စာရွက်နဲ့ ရုံးသွားရုံးပြန်လမ်းမှာရွတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးထည့်ထားတဲ့ ပရိတ်ကြီးဆယ့်တသုတ် မြန်မာပြန် (အမေကတော့ပြောတယ်. ဘုရားစာအုပ်လေးပါတာတော့ မဆိုးပါဘူးတဲ့။ သူ့သမီး အမြဲမရွတ်ဖြစ်တာ သိပုံတော့ရသား)
-Pasco ပန်းရောင် - သုံးနေဆဲ tissue တထုတ်။
-Ibanking remote တစ်ခု။
-ဟိုနေ့ကမှ အောက်ပြုတ်ကျပြီးကြေသွားတဲ့ မှန်နဲ့ရုပ်ဆိုးနေတဲ့ iphoneလေးနဲ့ ဖြစ်သလိုထည့်ထားတဲ့ နားကျပ်။
-ebook တွေနဲ့ သီချင်းတွေထည့်ထားတဲ့ အဖုံးအနီနဲ့ Ipadလေး။
-ဘောပင် ၂ချောင်း၊ တချောင်းက မီးထွန်းဖို့ (ဟီး စတာ)။ တချောင်းက အပြာရောင် ဘောပင်သေးသေးလေး။ ပုလဲ သရဖူလေးပါလို့ ဒီဇိုင်းလေးချစ်လို့ ထည့်ထားတာ၊ ရေးလို့ကတော့ မကောင်း။ ဒီတော့ရေးကောင်းတဲ့ Uni ball နောက်ထပ် အနက်ရောင်တချောင်းထပ်ထည့်။
-ရှိသမျှ သော့တွေတွဲထားတဲ့ သော့တွဲတခု။
ဒါကတော့ နေ့စဉ်ကျမ အိတ်ထဲမှာပါနေကျတွေပါ။ သွားမည့်နေရာနဲ့ အချိန်ကိုလိုက်ပြီး တခါတလေ အိတ်ထဲမှာ ပုဝါလဲပါ၊ cameraလဲပါနဲ့ ကျမကတော့ အိတ်ကြီးကြီးကိုင်ပြီး ကြုံသလိုကို ပစ်ထည့်နေတော့တာ။ နေမကောင်းပဲ ရုံးသွားတဲ့ရက်တွေဆို Raffle Medical ဆေးအိတ်လေးတောင်ပါသေး။ အိတ်ထဲမှာရှိတာတွေချရေးပြီးတော့ "ငါ့အိတ်က ဒီအမလောက် မများပါဘူး" လို့ အရင်ကတွေးမိတာ ပြန်တွေးမိတော့ အသံထွက်အောင်တောင်ရီမိသေးတယ်။ ပြီးတော့ ကျမအိတ်က သူများတွေလို ပစ္စည်းတွေက သူ့အမျိုးအစားနဲ့သူ သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊စီစီရီရီထည့်ထားတာ မဟုတ်ဘူးရယ်။ အိတ်ကြီးထဲက အတွင်းအိတ်လေးတွေထဲ ကြုံသလိုထည့်ထားတာလေး။ ကိုယ့်အိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီး "အော် ..ငါတို့ငယ်ငယ်ကသင်ရတဲ့ အရူးလွယ်အိတ်ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာ" လို့တွေးရင်း ဒီ တဂ်ပို့စ်ကို ချစ်ခင်စွာရေးပါသည်။
Posted by Adora etc. at 21:08 10 comments:
လွန်ခဲ့တဲ့လက မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်ကျွန်းကို အလုပ်က လွှတ်တာနဲ့ခဏရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်း လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းတာနဲ့ အထုပ်ကို ဟိုတယ်ပေါ်မှာဝင်ချ၊ ပီနန်က သူငယ်ချင်းကိုအဖေါ်ခေါ်ပြီး ထင်ရှားတဲ့ Peranakan Mansion ကို ပထမဦးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်တာကတကြောင်း၊ ပီနန်ကျွန်းကို လောလောလတ်လတ် World UNESCO organization က Heritage Town အဖြစ် ကြေငြာလိုက်တာက တကြောင်းကြောင့် လာလည်သူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးပါပဲ။ မင်္ဂလာပွဲအတွက် အကြိုဓါတ်ပုံလာရိုက်ကြသူတွေလဲ တပုံတပင်။ ၀င်ကြေးက အမှတ်မမှားဘူးဆို ၅၀ရင်းဂစ်ပေးရပါတယ်။ နည်းနည်းဈေးကြီးပေမယ့် တအိမ်လုံး ကြိုက်သလို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခွင့်ပေးတော့ တန်တယ်ပဲဆိုပါတော့။
အိမ်ထဲကိုဝင်တာနဲ့ The Little Nyonya ထဲကအိမ်ကြီးထဲကိုရောက်သွား သလိုပါပဲ။ ၁၉ရာစုက ဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးက လက်မှုအနုပညာတွေနဲ့ တခမ်းတနားပါ။ ကျမသဘောအကျဆုံးက ဝင်သွားတာနဲ့ လင်းချင်းနေတဲ့ အိမ်မကြီးရဲ့ အလည်ခန်းပါ။ အိမ်ပုံသဏ္ဍန်က ၂ထပ်အိမ်အမျိူးအစားကို အလည်ကခေါင်မိုးအမြင့်နဲ့ ဘေးက အခန်းတွေရန်ထားတဲ့ပုံမျီုးမို. နေရဲ့အလင်းရောင်က အိမ်မကြီးရဲ့အလည်ခေါင်မိုးအမြင့်ကနေ တအိမ်လုံးကိုဖြာနေတော့တာပေါ့။
ဒီပုံကို peranakanmansion.com.my website ကယူတာပါ။ အိမ်ဝင်ဝင်ချင်း ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ ဧည့်ခန်းပေါ့။ ဧည့်ခန်းရဲ့ နောက်က ကနုတ်ပန်းတွေနဲ့ဒီဇိုင်းဖော်ထားတဲ့သစ်သားတခါးက အိမ်ထဲကို evil spiritတွေ အပြင်ကနေတိုက်ရိုက် တန်းဝင်မလာနိုင်အောင်တားထားတဲ့တံခါးလဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဧည့်သည်တွေက ဒီတံခါးကိုကျော်ပြီး အိမ်ထဲကိုဝင်လေ့ မရှိပါဘူးတဲ့။ ပြီးတော့ အိမ်မှာရှိတဲ့ Peranakan အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေက ဒီတံခါးနောက်ကွယ်ကပဲ ဧည့်သည်တွေကိုချောင်းကြည့်လေ့ရှိကြပါတယ်တဲ့။ ကျမရိုက်တဲ့ ပုံထဲမှာ ဒီလောက်ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ တံခါးမပါလို့ ပုံကိုwebsite ကယူပြတာပါ။ =)
အိမ်မကြီးရဲ့အထက်၊အောက် အခန်းတွေကုန်အောင် အချိန်ပေးပြီးကြည့်ခဲ့တာ အိပ်ခန်းတံခါးမှန်ကစလို့ ဝရန်တာ တိုင်လုံးတွေအဆုံး plainဖြစ်တဲ့နေရာ မရှိသလောက်ကို ရှားပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ ကနုတ်ပန်းလက်ရာ၊ ပန်းပုလက်ရာ၊ ပန်းချီမျိုးစုံနဲ့ အိမ်ကိုအလှဆင်ထားပါတယ်။ ပြောင်နံရံတွေရဲ့ ရှေ့မှာတော. ထိုင်ခုံနဲ့ အလှစားပွဲ၊ ဒါမှမဟုတ် တရုတ်ကြွေပန်းအိုး အကြီးကြီးတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြောပြချက်အရ အိမ်ကိုရှေးကထားခဲ့တဲ့အတိုင်း လက်ရာမပျက်ထားထားတာဆိုတော. Peranakan လူမျိူးတွေရဲ့ အခြေသတင်းကြီးခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို မှန်းဆကြည်.မိပါတယ်။
လာပါပြီ။အိမ်မကြီးရဲ့ အနောက်ဘက်က ကျမမျှော်လင့်နေတဲ့အခန်း။အနောက်ဘက်က အဆောင်ထဲမှာ Baba Nyonyas တွေရဲ့ အဝတ်အစားအသုံးအဆောင်တွေ ပြထားတယ်ဆိုကတည်းက cameraတပြင်ပြင်နဲ့ လက်ယားနေခဲ့တာ..ဝင်ဝင်ချင်းပဲ ငွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဆွဲသီးတွေ၊ လက်ကောက်တွေတွေ့တော. Nyonyas တွေရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေဟဲ့ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံတွေ တဖြတ်ဖြတ်ပေါ့။ ရှေးလက်ရာတွေ၊ ခုလက်ရာတွေမတွေးနိုင်ဘူး ဓါတ်ပုံကိုရိုက်ချင်နေတာ။ မကြာဘူး ဝန်ထမ်းအမျိူးသမီး အနားရောက်လာပြီး ..."Excuse me. You can't take photos of our design. We are selling it. Would you like to makeapurchase?" ဆိုတော့မှ "Sorry" တွင်တွင်ပြောရင်း ကိုယ့်မှာ ရှက်ရှက်နဲ့ လစ်ထွက်လာရတယ်။
ဒါကဝင်ဝင်ချင်းလက်စွမ်းပြပလိုက်တဲ့ သစ်ရွက်ပုံ နဲ့ ပုစင်းပုံ ဆွဲကြိုးတွေပါ။ လှတယ်နော်.
အဲဒီအရောင်းပြခန်းကိုလွန်မှ အများမျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ အဝတ်အစားအသုံးအဆောင်တွေပြခန်းကိုရောက်ပါတယ်။ အခန်းရဲ့အလည် တလျှောက်လုံးမှာ မှန်ဗုံးတွေနဲ့ တန်ဖိုးကြီး လက်ဝတ်လက်စားတွေ အသုံးအဆောင်တွေပြထားပါတယ်။ ဘေး၂ဘက်နံရံမှာတော့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ အဝတ်အစားအချို.ကို မှန်ဘောင်သွင်းပြီးချိတ်ထားပါတယ်။ အောက်မှာတော. Dresser လို့ခေါ်တဲ့ ဗီရိုအပုလေးတွေနဲ့ တခြားအိမ်အသုံးအဆောင်တွေ၊ beaded ဖိနပ်တွေ စုံအောင်ပြထားပါတယ်။ အခန်းထဲကိုစဝင်သွားတာနဲ့ တကယ့်ကို ဝါဝါဝင်းပါပဲ။ Baba Nyonyas တွေကရွှေကိုနှစ်သက်တာမှ လက်ဝတ်လက်စားကစလို့ သွားကြားထိုးတံအထိ ရွှေနဲ့လုပ်ပါတယ်။ နားဖါကလော်လဲရွှေနဲ့ပါပဲ။
ကျောက်စိမ်းအဖြူ - White Jade နဲ့လုပ်တဲ့ ဝိုင်ခရား
ရွှေအတိပြီးတဲ့ သွားကြားထိုးတံနဲ့ နားဖာကလော်
ပုံတွေနဲ့ ပိုစ့်အရမ်းရှည်သွားမှာစိုးလို့ ဒီနေရာမှာ ခဏလေးဖြတ်ထားချင်ပါတယ်။ ပြန်လာလည်ပါအုံးနော်။ Nyonyas ဝတ်စုံတွေနဲ့ သူတို.လူမျိူးရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာဓလေ့တွေအကြောင်း ဆက်ရေးနေပါတယ်။
Posted by Adora etc. at 00:41 1 comment:
ကျွန်မရဲ့ blogလေးကို ကိုယ်ကိုတိုင်မရောက်တာကို တော်တော်ကြာပါပြီ။
အလုပ်က လွှတ်တဲ့ခရီးတွေရော၊ ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြီးသွားတဲ့ holidays တွေနဲ့လုံးချာလိုက်နေတာက တမျိုး၊ ပြီးတော့ ဘယ်သူမှ သိပ်မသိကြတဲ့ အိမ်လေးမှို့ စိတ်ဓာတ်နဲနဲကျတာလဲ တဖုံ နဲ့ ပစ်ထားလိုက်တာ အမသက်ဝေရေးထားခဲ့တဲ့ ၁၈ ဇူလိုင်က comment ကို တလတိတိအကြာမှ တွေ့တဲ့အထိပါပဲ။ နဲနဲတော့လွန်သွားပြီနော်။
ခုနလေးတင်ကမှ အမကို ပြေးလွှားကျေးဇူးတင်ရင်း အမအားကိုးနဲ့ပဲ ရေးလက်စအကြောင်းကိုပြန်စပါရစေ။ အကြာကြီးနေမှပြန်ရေးတာမို့လို့ Masquerade Ball ရဲ့အရေးပါတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေအကြောင်းကို ခဏလေးကြော်ပြီး ကျွန်မ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အဝတ်အစား ဖက်ရှင်အကြောင်းကို အရင်ရေးချင်ပါတယ်။
ရှေးရှေးက အနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဖက်ရှင်လို့ပြောရင် မျက်စိထဲမှာ ဘာမြင်ပါသလဲ။ ကျွန်မကတော့ လက်ရှည် ကိုယ်ကျပ် လည်ဟိုက်အကျီ နဲ့စကတ်ကားကားရှည်ရှည်ကြီးတွေကို မျက်စိထဲမြင်မိပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် Titantic ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက မင်းသမီး Kate ရဲ့ ကပွဲသွားတဲ့ ဝတ်စုံမျိုးပါ။ (Titantic ရုပ်ရှင် က ၁၉၁၂ ဝန်းကျင် - ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းက အဖြစ်အပျက်ဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုက အနဲနဲ့အများတူမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။) ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ စကတ်ကားကားကြီးဖြစ်ဖို့ အတွင်းကနေ အတွင်းခံ petticoat လိုဟာမျိုးခံဝတ်ပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ.၁၈ရာစု Masquerade Ball Gowns တွေက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အလှအပ၊ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်အတန်း ကိုဖော်ဆောင်ပါတယ်။ ကပွဲသဘင် ဆိုတော့ အရောင်စုံ ပိုး ဖဲ ကတီပါစတွေနဲ့ လှပအောင် ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ ဂါဝန်တွေကို မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ တွဲဝတ်ကြပါတယ်။ ကပွဲတွေမှာ အမျိုးသမီးတယောက်က အမျိုးသားတယောက်ထက် နေရာ၃ဆလောက်ပိုယူပါတယ်တဲ့။ ဝလို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဝတ်ရတဲ့ ဝတ်စုံအလှအပအတွက်ပါ။ ရာစုနှစ်အစောပိုင်းတွေမှာ ခေတ်စားတဲ့ ဖက်ရှင်က Sack Back Dress လို့ခေါ်ပါတယ်။ (အင်တာနက်မှာ ရှာပြီးအောက်မှာပြထားပါတယ်) ဂါဝန်အနောက်မှာ လည်ဂုတ်ကနေပြီး ပိတ်စ နောက်တထပ်ဆန်ဆန် ပါတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးပါ။ ဘာလို့ ဒီလို ပိတ်စထူထူထဲထဲ နောက်မှာချပြီး ဝတ်ဆင်ကြသလဲဆိုတော့ မိသားစုတခုရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို အဲဒီအိမ်ထောင်စုက အမျိုးသမီးလေးများရဲ့ကိုယ်ပေါ်က အဖိုးတန် ပိုး ဖဲ ကတီပါ ဝတ်ဆင်နိုင်မှုနဲ့ ဖော်ထုတ်ကြလို့ပါ။ဒီနေရာမှာ တခုပြောချင်တာက အဖိုးတန် ပိတ်စတွေကို dress maker ကအတတ်နိုင်ဆုံး မညှပ်ကြပါဘူး။ ဝတ်စုံအမျိုးမျိုးနဲ့ဝတ်ချင်ရင်၊ ပြန်ပြီး အသုံးပြုချင်ရင် အစဉ်ပြေအောင်လို့ပါ။ သူတို့ ခေတ်ကတည်းက ချမ်းသာတဲ့သူတွေတောင် Recycle လုပ်နေကြပြီနော်။
ရာစုနှစ်အစောပိုင်းတွေမှာ ခေတ်စားတဲ့ Sack Back Dress ဖက်ရှင်တခေတ်ကို အစားထိုးနေရာယူလာတာကတော့ ကိုယ်နဲ့အတိ ဝတ်ဆင်ရတဲ့ ကိုယ်ကျပ်ဝတ်စုံတွေပါ။ ကိုယ်ကျပ် အကျီတွေရဲ့အောက်မှာ corset လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးဝတ်အတွင်းခံတမျိုးခံပြီး လိုချင်တဲ့ ခါးသေးရင်ချီ အချိုးအစားရအောင် ဝတ်ကြပါတယ်။ လည်ပင်းပေါက် ပုံစံကတော့ လည်ဟိုက် လေးထောင့် ဒါမှမဟုတ် Uပုံစံ လည်ဟိုက်အဝိုင်း စတိုင်မျိုးပါ။ စကတ်ကို ခံဝတ်တဲ့အတွင်းခံကတော့ နဲနဲဆန်းပါတယ်။Pannier လို့ခေါ်တဲ့ အတွင်းခံ စကတ်က စကတ်ရဲ့ ရှေ့နောက် မှာဘာမှမပါဘဲ ဘေး၂ဘက်မှာပဲ ကားထားတဲ့ ပုံမျိုးပါ။ ဒီအမျိုးသမီး စကတ်ဒီဇိုင်းမျိုးကို စပိန်နိုင်ငံက စတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်က ဖက်ရှင်eraကို ဦးဆောင်နေတာ ပြင်သစ်ပါ။ Louis XV ရဲ့ mistress Madame Pompadour နှစ်သက်တဲ့ ပန်းပွင့်၊ အဆင်း ပိတ်စ ဒီဇိုင်းတွေကို pastel colors လို့ခေါ်တဲ့ Baby Pink လို Mint Green လို ဒါမှမဟုတ်ရင် အပြာဖျော့ဖျော့နဲ့ အသားရောင်လို အရောင်တွေနဲ့ ဝတ်စုံ ခေတ်စားလာပါတယ်။ အင်မတန် နုညံ့ပြီး မိန်းမဆန်တဲ့ ဝတ်စုံတွေ ဖြစ်မှာပါ။ Madame Pompadour ကသာ ခုခေတ် ကျွန်မတို့သိတဲ့ ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေလို အရပ်ရှည်ရှည် ပါးပါးလျလျနဲ့ လှပြီးသားအမျိုးသမီးသာဆိုရင် သူမနှစ်သက်တဲ့ pastel colors အပွင့်အခက် ဝတ်စုံတွေနဲ့ တော်တော်လိုက်မှာပါ။ အင်တာနက်မှာ ရှာတွေ့တဲ့ Madame Pompadourရဲ့ ပုံက အောက်မှာပါ။
ဒါက Pannier လို့ခေါ်တဲ့ အတွင်းခံ စကတ်နမူနာပါ။
နောက်ပိုင်းကြတော့ Haute Couture dress တွေရဲ့ ဘုရင်မလို့ တင်စားကြတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးဘုရင်မ Marie Antoinette ရဲ့ဖက်ရှင်တွေ တခေတ်ဆန်းလာပြန်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖက်ရှင် နဲ့သူမရဲ့ dressmaker Rose Bertin တို့ရဲ့ ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေဟာ တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေအထိ ပြန့်နှံ့ပြီး အမျိုးသမီးများကြား ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ Marie Antoinette ကတော့ Madame Pompadour လို အရောင်ဖျော့ဖြော့ တွေစိတ်ဝင်စားဟန်မတူပါဘူး။ "Extreme extravagance was her trademark" လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဘုရင်မဆိုတော့ သူရဲ့ဝတ်စုံတွေက ရဲရဲရင့်ရင့် တောက်တောက်ပပနဲ့ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွားရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
ဒါက Marie Antoinette ရဲ့ပုံတွေပါ။ အင်တာနက်ကပဲယူပါတယ်။
Masquerade Ball အကြောင်းရေးနေလို့ ဒီဝတ်စုံပုံစံတွေက Ball တွေ Carnival တွေမှာပဲ ဝတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကပွဲတွေ၊ ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာ ပိုပြီးအဖိုးတန်တဲ့ ပိတ်စတွေနဲ့ ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ ဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီး သာမန်အချိန်တွေမှာဆို ရိုးရိုးပုံစံ ဝတ်စုံတွေဝတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ Pannierကိုသာမန်အချိန်မျိုးမှာမဝတ်ကြပါဘူး။
ခုနောက်ဆုံး ၁၈ရာစုလောက်က ဆံပင်ပုံစံတွေနဲ့၊ accessories တွေအကြောင်း နည်းနည်းထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာက ဆံပင်ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုပါ။ မြန်မာဝတ်စုံ လှလှပပဝတ်ပြီးပွဲတွေတက်တဲ့အခါ ဆံပင်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ဆင်ထားမှ ပိုလှသလိုမျိုး ကပွဲသဘင်တက်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကလဲ သူတို့ရဲ့ ဝတ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ ဆံပင်ပုံမျိုး ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ အဓိကထင်ရှားတဲ့ ဆံပင်ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုတွေကတော့ ဆံထုံးအမြင့်ကြီးထုံးတာရယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆံပင်ကောက်ပုံစံ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ငှက်အမွှေးအတောင်တွေနဲ့ဆံထုံးကို အလှဆင်တာမျိုးအပြင် အများနဲ့မတူထူးခြားတဲ့ ဆံထိုး ထိုးတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆံထိုးတွေဟာ ဘယ်လောတ်အထိ ခေတ်စားလိုက်သလဲဆိုရင် ငှက်ကနေ စေတီပုံစံတွေအထိ ဆံထိုးပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ်တဲ့။
စာလာဖတ်တဲ့သူတွေမှတ်မိမယ်ဆိုရင် ဒီMasquerade Ball အကြောင်းကိုစပြီးရေးဖြစ်တာ company D&D ကြောင့်ပါ။ Masquerade Ball ဆိုတာကို သေသေချာချာ နားမလည်တာက တကြောင်း၊ ဘာဝတ်ရင်ကောင်းမလဲ လျှောက်စဉ်းစားရင်းရဲ့ ဖတ်မှတ် လေ့လာမိတာလေးတွေကို ပြန်မျှချင်တဲ့သဘောနဲ့ ခေါင်းစဉ်ခွဲပြီးရေးဖြစ်နေတာ ဆိုပါတော့။ ဒီတော့ အပေါ်က Masquerade Ball တွေရဲ့ ဖက်ရှင်တွေအကြောင်းဖတ်ပြီးတော့ ၂၁ရာစုကြီးထဲမှာ တယောက်ထဲ၃ပေ နေရာယူဖို့လဲမလွယ် ..စလုံးက ရုံးဆင်း ရုံးပြန်ချိန်ဆို လုံးဝ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး =) ၊ နေရာရှိတယ်ဆိုရင်တောင် Pannier ဘယ်မှာရှာရမလဲမသိ၊ ဖဲတို့ ကတီပါတို့ကလဲ ဒိတ်အောက်နေပြီ ဘာသွားဝတ်ရတော့မလဲလို့ မေးမဲ့သူရှိရင် Adora ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးထားတာလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ နောက်တခေါက်ကြရင် Masks တွေအကြောင်း ရေးပါအုံးမယ်။
Posted by Adora etc. at 09:302comments: